“Inta Qaylinaysa Waa Afmishaaradii Xafiisyada Dawladda Ku Wareegijirtay Oo … | Somaliland.Org
October 31, 2011	(London-HNW) Wasiirka Maaliyada Jamhuuriyadda Somaliland Eng: Maxamed Xaashi Cilmi ayaa ka dhawaajiyay in qaylada inta badan ka soo baxda Somaliland ay ka timaado xubno afmishaaro ah oo mashaqays tayaal ah, isla markaana ku dhex wareegi jiray Xafiisyada Dawladda, ku waas oo hadda waayay wixii ay heli jireen. Sidaana wuxuu ku sheegay waraysi xiiso badan oo lala yeeshay. Ugu horreyn Eng; Maxamed Xaashi wuxuu ka shekeeyay, waxqabadka wasaaradiisa muddadii uu joogay, waxyaabaha uu qabtay ama wasaaradiisa u qabsoomay, wuxuuna ka xusay mushaharka shaqaalaha ee la laban laabay, Raashinka ciimadamadda, qalabka isbeer baartiga ee gaadiidka dawlada iyo ciidamada, lacagta Burco ee la badalay iyo arrimo kale. Wasiirka Maaliyada Jamhuuriyadda Somaliland Eng: Maxamed Xaashi Cilmi
Eng: Maxamed Xaashi Cilmi oo la waydiiyay su´aal ahayd, in lagu xanto gacan adayg isla markaana tan iyo wakhtigii uu Wasiirka Maaliyadda noqday aanay waxba ka soo bixin gacantiisa wax gala mooye, waxaa arrimahaas ka jira wuxuu kaga jawaabay.
“Horta haddii la yihaadhdo Deeqsi maha, dee Mushaharka la laban laabay ee intaas oo shaqaale ah gaadhay, qalabka isbeer baartiga ee gaadiidka dawladda loo iibiyay waa deeqsinimo, oo lacagtaasi halkii loogu tallo galay ayay martay, lakiin tan ah waxba ma bixiyo qofku wuxuu deeqsi ku noqon karaa wuxuu leeyahay, lakiin wax ummadi leedahay oo dawladu leedahay dee deeqsi laguma noqon karo. Anigu waxaan qaata mushahar kooban mana gadhaayo mushaharkaygu ummadda, marka qof ii yimaado ee igu yidhaahdo maanta adaan kugu soo tallo galay, ee aanan hayn wax ii gooniya oo aan siiyo dee qofkaasi wuxuu u arkaa inaan qadiyay. Markaa wax qofku leeyahay ayuunbu deeqsi iyo gacan furnaan ku heli karaa lakiin wax ummadi leedahay deeqsi laguma noqdo. Intase shaxaad doonka ahi waa in kooban oo afmishaaro ah waxaase ka badan inta caamka ah ee shaqaalaha ah ee ciidamadda ah ee wax loo kordhiyay, wayse ka cod dheeryihiin afmishaaradu oo yaga codkooda ayaa la maqlaa. Waxaanse rajaynayaa inay hadda iska aamusi donaan oo iska quusan donaan, inta qaylinaysa ee Somaliland ka hadlaysa waa intii afmishaarka ahayd ee ma shaqaystayaasha ahaa, ku waas oo xafiisyada ku wareegi jiray, marka wixii ay heli jireen waa la waayay, ama kolay jaad oo lasoo mariyo ha noqoto, ama shidaal dawladu leedahay oo lasiiyo ha noqotee way wayeen wixii lasiin jiray.”
Eng: Maxamed Xaashi Cilmi ayaa markale la waydiiyay su´aal ahayd, in Xisbiyada Mucaaridka ah ee Somaliland ku eedeyaan dawladda Axmed Silaanyo Musuq Maasuq iyo eex, isla markaana lagu eedeeyo in beesha Madaxweynuhu ka soo jeedo sigaara wax loosiyo, maadaama uu yahay Wasiirkii maaliyada oo lacagtii uu isagu hayo wuxuu arrimahaas kala socdo in beesha Madaxweynaha Somaliland wax gaara la siiyo, wuxuuna kaga jawaabay.
“Anigu maan arag meel jeeg ka baxaayo iyo cid jeegag la siinaayo, waayo dee anigaa Wasiirkii maaliyada ah oo bahashaba haya oo waan arki lahaa, Madaxweynaha Somalilad (Axmed Silaanyo) runtii maaha nin qabiili ah ama qabiil ku shaqaysta, umana dhalan oo waligii laguma arag arrintaas, umana baahan maantana uma baahna, markii doorashada lagu jiray dee dadku qaab qabiil ayay isu abaabulayeen oo codadka ku bixinayeen waxna isku tarayeen, lakiin Axmed Silaanyo loogama baran nin ku dhagan qabiilka. Waana arrin iska dabiici ah in beesha Madaxweynaha markasta la yidhaahdo dadka way uga dhawyihiin, oo taas guud ee ah hebel iyo hebel waa isku qabiil oo way is xigaan waa taas uun ayaan filayaa. Waxse gaara ahi ma jiraan. Mida kale beesha intaas leeg ee Yurub iyo America iyo adduunka oo dhan joogta ee shiikh iyo shariifba leh yaa waydiiyay amase cod ka qaaday inay beelnimo wax ku helaan, miyaanay gef ahayn. Markaa taasi ma jirto Madaxweynahana kama suurtowdo. Midbaanse ku sheegayaa, qolada Udub ma inay dib isu habeyaan oo ay isa saxaan mise udubtii hore, Udub inay maanta hadasho meeshaba mataal. Illahay ayaa nosoo diray oo haddii ay laba bilood doorashadu daahi lahayd dalkuba wuu dumilahaa, marka aanad afar bilood mushahar bixin, ee raashinkii ciidamadda lagugu leeyahay, ee waxaas oo dhan taagan yihiin waxaa ku hadhay waa maxay. Waxaan leeyahay qoladaas Udub yagu dhibtay dalkan u gaysteen way ogyihiin, Waddan qalfoof ah ayay ka tageen, marka yaga hadalba uma yaal. Xisbiga Ucid inankaan Abtiga u ahay (Faysal Cili Waraabe) isaga waxaan odhan lahaa oday xagga danbe u jooga Xisbiga noqo, oo dadka jaanis sii, in kasta oo hadda ay kala baxeenba qoladii kale, haddana marka muddo lasoo shaqaynaayay ee wax lasoo waday in Waxaasi burburaan ma fiicna. Markaa isaga intaas ayaan odhan lahaa inuu dadka jaanis siiyo ayaa fiicnayd.”
Wasiirka Maaliyada Somaliland ayaa markale la waydiiyay su´aal ahayd in dadku mala awalayeen markii Xilka Wasiirka Maaliyada loo dhiibay, in Maxamed Xaashi iyo Madaxweyne Silaanyo aanay isla kenayn shaqada, haddana sannad iyo badh ayay maraysaa sidee ayay tahay wada shaqayntiinu. Wuxuuna ku jawaabay Eng: Maxamed Xaashi
“Madaxweynaha Somaliland nin lacag inuu dalkan ka dhaqdo u baahan maaha, sidii qoladii hore (Xukuumaddii Daahir Rayaale) u isticmaali jirtay haaf milyan ayaan ka qaatay hebel ee badh cashuurta uga goo badhna kastamka ka sii, nin dariiqadaas yaqaana maaha, waa nin Mushaharkiisu ku filan yahay. Baahina uma qabo inuu wax ka uruursado, marka xaggaas saxiib ayaanu ka nahay isku rayina waanu ka nahay. Xagga kale wali maan arag wax daw ah oo aan ula tago oo uu igu diido, wixii daw darro ahna ulama tago, qofna maaha in loola tago. Nin been sheegana maaha Madaxweynuhu oo wixii aad waydiiso sidii ay tahay ayuunbu ku sheegin. Tan khilaafka ay dadka qaar rajaynayaan wax jira maaha saan saankeeduna ma muuqdo, ana waan shaqayn isna wuu shaqayn dalkuun baanu u wada shaqayn, in aanu magac ka tagno weeye u jeedadayadu. Isna wakii muddada dheer SNM guddoomiyaha u ahaa, marka annagu maanta in aanu ummadda wax uga tagno mooyiye in aanu wax gaara ka tabcano meesha uma joogno. Taas uunbanu ku heshiisnahay.”
Waraysiga lala yeeshay Wasiirka maaliyada oo aad u dheera suurto galna aanay ahayn in aanu soo wada turjuno, ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka midyihiin, Sixir bararka ku dhacay cuntada la quuto iyo waxay ka qabanayaan, isagoo sheegay inay beerashada dhulka Somaliland xooga saari donaan, sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay inuu diyaarin doono Misaaniyad dhammaystiran, sannadka cusub ee 2012 taas oo ay ku jiraan Xisaab xidhkii qaranka iyo lacagtii doorashada dawladaha hoose, wuxuu sidoo kale ka hadlay siday wasaaradda Maaliyadu ugu najaxday ardaydii dhalinyaradda ahayd ee ay shaqalaysiyeen ee jaamacadaha dalka ka soo baxday, ku waas oo ka madhan ayuu yidhi Musuq maasuq ilaa hadda, korna u qaaday cashuurihii bariga.
Previous PostWasiirka Warfaafinta oo Tababar xirfadeed u furay Suxufiyiinta warbaahinta dawladdaNext PostXaflada loogu wanqalayay furitaanka xarunta Telefiishanka Qaranka ee Yurub oo lagu qabtay London	Blog